15 Responses to “ရေမဆေးကျောက်”
သိပ်အဖိုးတန်တဲ့ ရေမဆေးကျောက်လေး..အဲဒီလို လက်တုံပြန်တာလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်...
မချောရေးထားတာလေး ဖတ်ဖူးနေတာ... အခု နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်.. မကေင်းမှုဆိုတာ ပုန်းရှောင်နိုင်ရိုးမရှိပါဘူး.. အရိပ်လိုထပ်ကြပ်လိုက်လာမှာပါပဲ..
Revenge တွေထဲမှာ ဒီလို Revenge မျိုးကတော့
ချစ်စရာတောင် ကောင်းနေသေးတော့တယ် ... :)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ် လောက်က မြတ်ကြည် အမေလည်း ခံ ရဖူးတယ်။ အရည်ရှိတဲ့ နေရာလေးတွေကို ကော်နဲ့ ပြန်ကပ်ထားတာ။ :D
ကိုယ်တွေနဲ့ စိမ်းတဲ့ ဒေသန္တရဗဟုသုတလည်း ရတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းခဲ့သူအပေါ် ပညာသားပါပါ လက်တုန့်ပြန် အနိုင်ယူခဲ့ပုံလေးက သဘောကျချင်စရာ..။
ပြန်ဖတ်တော့လည်း ကောင်းဆဲ၊ အရသာရှိဆဲပါ..။
ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဝတ္တုတိုလေးပါ..
မရောက်ဖူးတဲ့ ဒေသ၊ မကြားဖူးတဲ့ ဝေါဟာရ၊ လုပ်ငန်း အခင်းအကျင်းတွေကို သိရတာ အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလို အမုန်းမစွက်တဲ့ လက်စားချေပုံလေး ကလည်း ဝတ္ထုကို လှပစေပါတယ်..၊
အခုမှ ဖတ်ဖူးတာ မချောရ.၊ အခုလို ပြန်တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။
ယုံကြည်မှုကို ရိုက်ချိုးခံရတာ၊ သစ္စာဖောက်ခံရတာ ဘယ်လောက် ခါးသီးဖို့ကောင်းတယ် ၊ မနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒီလူကြီးသိသွားတဲ့
ကျောက်လောက အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ ဖတ်ရတော့ ရေမဆေးကျောက်တို့၊ ထမင်းစားကျောက်တို့၊ တာပလာ တို့ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ ပြန်သတိရသွားတယ်။ မချောစာကို ဖတ်ပြီး ကျောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ တွေ ထပ်တိုးသွားလို့ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ်လည်း ဗဟုသုတရစေတဲ့ စာတွေ များများရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ :)
စိတ်ဝင်စားစရာ စာလေးပါ ချော...။
၀ထ္ထုဟောင်းလေးလည်း ဖတ်လို့ကောင်းတာပါပဲ...ကျောက်လောကမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အယုံသွင်းပြီး လိမ်တဲ့ ကျောရိုးပေါ်မှာ ကလဲ့စားချေခြင်းဆိုတဲ့ အမည်းစက်ထိုးလိုက်ပေမယ့် ပညာပေးရုံသက်သက်ပဲဆိုတဲ့ အပြုသဘောဆောင်ခြင်းက ဇာတ်လမ်းကို သယ်သွားတာ အားရ၀မ်းသာဖြစ်မိပါကြောင်း ဒေါ်ချောခင်ဗျား...
တွေပေးခဲ့တာကိုမေ့နေ တတ်ပြီး ကိုယ့်ဝေ
မကောင်းမှုဆိုတာ ဒီလိုပဲ တစ်ချိန်မှာ
အဟောင်းပေမယ့် မဖတ်ရသေးတော့ ကောင်းသားဗျ မချော။ ဗဟုသုတလည်း ရတယ်။ ဇာတ်ရဲ့အလှည့်လေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသား။ ကျွန်တော်က ရိုးရိုးလိမ်သွားတာဆို သိပ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပညာပေးဖို့လိမ်သွားတာဆိုမှ ဇာတ်ကို နားလည် လက်ခံလို့ရသွားတာ။ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က မချောကို ၀တ္ထုတိုမရေးဘူးထင်ထားတာ။ ဆက်ရေးပါလို့......။
ကျောက်သမားတွေရဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို နားလည်ခွင့်ရလိုက်သလို ဗဟုသုတလည်း ရလိုက်တယ်.
မချောက တကယ့်ကို လေ့လာမှုအားကောင်းတာပဲ.
ဇာတ်လမ်းလေးကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်. အဲဒီ့လို ကလဲ့စားမျိုးက ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေတဲ့အပြင် တစ်ပါးသူကိုပါ အကျိုးရှိစေသေးတယ်.